I-FAQ-Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba unxibelelwano nenkampani yakho ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya.
Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko, siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi, siyakwazi ukwenza njalo.
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela okhetha ukufumana ngayo iimpahla. I-Express ngesiqhelo yeyona ikhawulezayo kodwa yeyona ndlela ibiza kakhulu. Ngolwandle sesona sisombululo sisiso semali enkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso ezinto sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ngaba unikezela ngenkonzo yabucala yesiko labucala?
Ewe sinako ukwenza logo yakho yabucala kwiimveliso kunye nokupakishwa. Kufuneka usithumele nje ngemifanekiso yelogo, ngesiqhelo ubugcisa beAdobe Illustrator kunye nomsebenzi wobugcisa wePDF uya kwenza okungcono ekushicileleni.
Abathengisi bee-Eyelash, Imivimbo yamehlo, Izandiso zeEyelash, I-liner yamehlo, Imivimbo ye-mink, eyeliner,